Wax walba Ogow, Si Aad Wax Walba U Sameyn Karto: Sidee 6sense U U Carqaladeynayaa Warshadaha ABM | Martech Zone
Wax walba Ogow, Markaa Waxaad Sameyn Kartaa Wax Kasta: Sidee 6sense U U Carqaladeynayaa Warshadaha ABM
Iibsashada B2B way is bedeshay - dadka maanta iibsada waa la aqoonsan yahay, kala daadsan yahay oo adkaysi u leh. B2B Iibinta iyo Suuqgeynta dadaallada waxay sii wadaan inay noqdaan kuwo sii yaraada oo aan waxtar lahayn maadaama kooxaha dakhliga soo saara ay u dagaallamayaan weligood sii yaraanaya dareenka macaamiisha iyo rajada laga qabo jawi durba ciriiri ah oo sii kordhaya. Si loo tartamo oo loo guuleysto maanta, kooxaha dakhliga B2B waxay u baahan yihiin inay beddelaan qaabkooda si ay ula jaan qaadaan dalabyada iibsadayaasha casriga ah ee B2B.
Muuqaalka iibsashada B2B maanta, iibsadayaashu waa:
Anonymous - Xaqiiqdii, keliya 10 boqolkiiba booqdayaasha degellada ayaa is aqoonsada.
Jajabay - celcelis ahaan, 9.6 dadka waxay ku lug leeyihiin go'aanka iibsiga B2B caadiga ah;
Degganaan - boqolkiiba 70 wareegga iibka ayaa la dhammaystiray ka hor intaanu la macaamilin iibiyaha
Tani waxay ka dhigan tahay iibsadayaashu inay gacanta ku hayaan safarka. Tani waxay badanaa jahwareer ku noqon kartaa kooxaha dakhliga ee ku fashilmay inay ku xirmaan macaamiishooda ku habboon waqtiga saxda ah, fariinta saxda ah. Runtu waxay tahay; maahan dad, anshax shaqo, ama xitaa mushkilad socodsiinta - Waa dhibaato xagga xogta ah.
Furaha xalinta dhibaatadan ayaa ah adeegsiga AI iyo Macluumaadka Weyn si loo siiyo kooxaha dakhliga sawir buuxa oo buuxa oo ku saabsan safarka iibsadaha, iyadoo la siinayo aragti ku saabsan waxqabadyada la yaqaan iyo kuwa aan la aqoon. Tani waxay u baahan tahay in laga fogaado wadajirka codsiyada halista ah iyo maalgelinta barxad ballaadhan oo karti u leh qabashada iyo falanqaynta xogta lagama maarmaanka u ah wax ka qabashada habka iibsadayaasha maanta ay wax u iibsadaan (magac la'aan, jajab, adkaysi).
Waxaan haysannay Codsi Qaabdhismeed Fiican, Codsi Ogaansho Intent, iyo dabcan waxaan soo bandhignay xayeysiin. Iyadoo loo marayo 6sense waxaan awoodnay inaan ku xoojino dhammaan kuwa hal meel oo ka dhex shaqeeya qaybaha kala duwan sidaa darteed waxaan haynaa sawir buuxa oo ku saabsan waxa dhacaya.
Nick Ezzo, VP ee Jiilka Rabitaanka, Sage Intacct
Tartan iyo Guul leh 6sense
6sense waxaa loogu talagalay xisaabaadka casriga ah ee ku saleysan iibka iyo kooxaha Suuqgeynta, iyaga oo siinaya awood ay ku soo bandhigaan dabeecadaha wax iibsiga ee aan la aqoon, mudnaanta u siinaya waqtiga iyo miisaaniyadda ku saleysan xisaabaadka suuqa, iyo ka guuleysiga iibsadayaasha iska caabbinta iyagoo fulinaya ka qeyb qaadasho shaqsiyeed, kanaal badan.
Awoodda ururinta, isku xirka iyo ka faa'iideysiga Aragtida Macaamiisha ayaa fure u ah guusha ABM. Kuwo badan oo raadinaya tikniyoolajiyadda ABM waxay kubilaabaan iyagoo waydiinaya waxa badeecada ama madalku qaban karto; waa maxay muuqaalka guud ee dhameystiran. Waa inay isweydiiyaan sida loo adeegsado Xogta Aragtida Macmiilka si loo xoojiyo loona xoojiyo awoodahaas. In kasta oo aan aaminsanahay 6sense inay ugu dambayntii bixin doonto muuqaalka ugu ballaadhan ee lagu dejiyey iibka iyo Suuqgeynta, aasaaska waa in lagu dhisaa fikradaha Macaamiil ee AI-Wada, ama gambaleellada iyo foorida midkoodna macno maleh. Waa sababta khadkeennu ku bilaabmayo Wax walba Ogow - Hadafkeenu waa inaan awoodda AI iyo Xogta Weyn gadaal ka saarno xirfadle kasta oo Iibin iyo Suuqgeyn ah maxaa yeelay haddii aan sidaa yeelno, waxaan aaminsanahay inay sameyn karaan 'Wax Walboo (si ku dhow).
Sarkaalka Madaxa Suuqgeynta Latane Conant ee 6sense
Hordhaca ABM waa inuu si aad ah u wanaajiyo bartilmaameedka, waqtiga, iyo shaqsiyeynta. Tani waxay u baahan tahay sawir buuxa oo ku saabsan safarka iibsashada macmiilkaaga, oo ay ku jiraan waxqabad aan la aqoon oo hadda ah inta badan safarka iibsiga B2B. 6sense ayaa tan kuugu yeerta Madadaalo Madoow.
Macaamiisha 6sense waxay adeegsanayaan barxad si ay si wax ku ool ah u kobciyaan dadaalkooda ABM, iyagoo fulinaya kiisas badan oo adeegsi ah Suuqgaynta iyo Iibkaba.
Caddayntu waxay ku jirtaa Natiijooyinka Macaamiisha
Macaamiisha 6sense waxay guranayaan faa'iidooyinka AI-ku-saleysan Abaabulka Xisaabaadka, oo leh natiijooyin dhab ah sida 40% + kororka fursadaha, cabbirka heshiis celceliska weyn, wareegyada iibka dhakhsaha badan, iyo heerarka guusha sare. Mid ka mid ah macaamiisha noocaas ahi waa PGi, hogaamiye caalami ah oo iskaashanaya. PGi waxay u baahnayd inay ogaato
Sida loogu kala sooco suuq cakiran, tartan badan
Sida diirada loo saaro dadaalkooda ABM xisaabaadka muhiimka ah
Sida loo hubiyo isku toosnaanta udhaxeysa Suuqgeynta iyo Iibinta
Iyagoo adeegsanaya 6sense waxay awoodeen inay diirada saaraan dadaallada xisaabaadka 'suuqa' waxayna bixiyaan fikradaha waqtiga dhabta ah ee iibka si loo hubiyo tabta saxda ah iyo farriinta ay gaareen rajooyinka horraantii wareegga iibka. Tani waxay dhalisay a Kororka boqolkiiba 68 xiriir-waqti-la-xiriir, koror boqolkiiba 77 ah oo ku saabsan heerarka guuleysiga, iyo kororka 9X celceliska heshiiska.
Macaamiisha 6sense sidoo kale waxay awoodaan inay bartilmaameedsadaan farriintooda ku saleysan waxa iibsadayaashu runti daryeelaan oo ay si firfircoon u baaraan. Mediafly, Hogaamiyaha barmaamijka karti-siinta iibka ee Evolved Selling ™, wuxuu rabay inuu kordhiyo tayada iyo tirada xisaabaadka imanaya boggooda. Waxay doonayeen inay ogaadaan:
Xisaabaadkee ayaa ku soo dhacaya degelkooda si qarsoodi ah, oo raadinayay xalkooda laakiin aan booqanayn boggooda - aka uncover their Dark Funnel
Maxaa mawduucyada xisaabaadka muhiimka ah ee daryeelka suuqa ku saabsan ku saleeysan calaamadaha ujeeddada
Sida loo bartilmaameedsado barnaamijyadooda xayeysiiska ABM si ay si fiican ugu gaaraan koontooyinkooda Madadaalada Madoow
Qofkee ayaa bartilmaameed u ah xayeysiintooda bandhigga ABM
Daahfurka barnaamijkooda mugdiga ah iyo fahamka iibsashada dabeecadaha ujeeddooyinka ku saleysan, Mediafly waxay awood u yeelatay inay bartilmaameed ka dhigato xayeysiiska bandhigga ABM ee xisaabaadka saxda ah iyo shakhsiyaadka, taasoo keentay 10X in ka badan oo la-riixo oo ah ololeyaal loo habeeyay, iyo a 10X iyo kordhinta fursadaha inbound.
Hay'adaha Suuqgeynta iyo Iibinta ee raadinaya inay adeegsadaan qaab si guul leh loogu korsado oo loo cabbiro ABM waa inay tixgeliyaan Nidaamka Isbahaysiga ee Salka ku Haya Xisaabta '6sense Account,' oo ay ku shaqeyso AI, halkii ay ka wada duwanaan laheyd xogta ujeedka ah, xogta xisbiga 3aad, soo bandhigida tikniyoolajiyadda ABM, iyo falanqaynta. Fahmitaanka AI-kexeeyo ayaa xaqiijinaya in barnaamijka '6sense' uu farriinta saxda ah u gudbinayo qofka saxda ah waqtiga saxda ah wuxuuna siinayaa aragti safarka iibsadaha oo dhameystiran - gaar ahaan howlaha ka dhacaya si qarsoodi ah oo kooxo badan oo iibka B2B iyo Suuqgeyn u tegayaan.
Ma rumaysan? Bilow inaad daaha ka qaaddo masaskaaga mugdiga ah hadda!
Tags: abmsuuq geynta xisaabtab2bganacsiga ganacsigamadadaalo madow